मेलम्ची खानेपानी प्रकरणः किन हटाइए सचिव ठाकुर ? किन ल्याइए शर्मा ?
‘कमिसन’चक्करमा कसरी फसाउँछन् सचिवहरुले मुलुकलाई नै भँड्खारोमा ?
| 2019-02-20 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयभित्र सचिवमा हेरफेरसम्म पुगेर मेलम्ची खानेपानी विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
मेलम्चीबाट निर्माण कम्पनी सिएमसी बाहिरिनुमा सचिव गजेन्द्र ठाकुर नै कडी रहेको आरोप लाग्दै आएका बेला खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सुरु गरेको एक्सन उनको सरुवामा गएर टुंगिएको हो ।
मन्त्री मगरका अनुसार सिएमसीसँग सचिव ठाकुरले कमिसन मागेको खुलेको थियो । मन्त्री मगरले आफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याउन सफल भएकी छन् ।
शर्मा त्यस अघि सहरी विकास मन्त्रालयमा लामो समय सचिवका रुपमा रहेका थिए । मेलम्ची प्रकरणले सचिव ठाकुरको छविमा दाग लागेको छ ।
उनकै भूमिकाका कारण सिएमसीलाई समयमै भुक्तानी नगरेर आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पार्ने काम भएको उनीमा आरोप लागेको छ ।
विवादास्पद ठाकुर यतिबेला जगेडा समूहमा सरुवा भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ठाकुरलाई जगेडा समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि शर्मालाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।
सिएमसी बाहिरिएपछि, मन्त्री बिना मगरले भुक्तानी नपाई काम छाडेको ठेकेदार सिएमसीसँगको वार्ता सफल गरी उसैलाई काम गर्न दिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, त्यसविपरीत सचिव ठाकुर लागेको पाएपछि उनलाई सरुवा गरिएको खुलेको छ ।
मन्त्री मगरले नयाँ ठेक्कापट्टा गर्दा मुलुकलाई थप १० अर्ब रुपियाँ घाटा पर्ने विश्लेषण गरेकी छन् ।
‘त्यही कारणले पुरानै ठेकेदारबाट बाँकी काम पूरा गर्नु पर्ने मैले बताउँदै आएकी थिएँ’, उनलाई उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बोर्ड संरचना अनुसार खानेपानी सचिव मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड अध्यक्ष हुने गर्छ ।
मन्त्रालय स्रोत अनुसार ठाकुरले सिएमसीसँग कमिसन मागेको खुलेको हो ।
स्रोत अनुसार सिएमसीका तर्फबाट अतिरिक्त लागत र थप समयअवधिको निहुँमा बोर्डमा विवाद ल्याउँदा १ अर्ब ६५ करोडको ‘क्लेम’ गरिएको थियो ।
त्यसमा मन्त्रालयले पुनरावेदन गरेको थियो । पछि बोर्डले ३६ करोड सिएमसीलाई दिनुपर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । मन्त्री सचिवालय स्रोत अनुसार उक्त ३६ करोडमा सचिवले कमिसन मागेका थिए ।
सिएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भएपछि
सुरु सुरुमा सिएमसी बाहिरिए पनि नेपाललाई खासै घाटा नपर्ने बोल्दै आएकी मन्त्री मगरले जब यथार्थ बुझ्नि त्यसपछि सचिव ठाकुरलाई तारो बनाउँदै आइन् ।
उनले नयाँ ठेक्का गर्दा पुरानो ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (सिंगापुर) जाने भयो भने सरकारले उसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्थ्यो ।
त्यसबाट सरकारले कम्तीमा पनि ७ अर्ब रुपियाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्री मगरलाई विशेषज्ञहरुले सुझाएका थिए ।
‘यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छवि पनि धमिलिने र मुलुकले अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएपछि पुरानैलाई निरन्तरता दिने निचोडमा मन्त्री मगर पुगेकी थिइन’, सचिवालयले भन्यो ।
तर, यसको ठीक विपरीत सचिव ठाकुर चाहिँ जसरी हुन्छ पुरानो निर्माण कम्पनीलाई भगाएर नयाँ ठेक्का गराउने कोसिसमा लागिपरिरहेका थिए ।
यसै कारण सिएमसीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्न समेत आफै लागिपरेका थिए ।
मेलम्ची बोर्डले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउने निर्णय गर्न राखेको बैठकमा बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ठाकुर अनुपस्थित समेत रहन पुगेपछि उनको नियत खुलेको थियो ।
तैपनि, विवाद निरुपण बोर्ड (डिआरबी) ले २१ दिनभित्र ठेकेदार सिएमसीलाई ३६ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिएमसीले भने आफूले क्लेम गरेको रकम नपाए ठेक्का रद्द गर्ने पूर्व चेतावनी दिदै आएको थियो।
कतिसम्म भयो भने, भुक्तानी नपाएर स्वदेश फर्कन लाग्दा (क्रिसमस नजिकिदै गर्दा) निर्माण कम्पनीका सदस्यहरुलाई सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरीको डफ्फा परिचालन गरी ठमेलस्थित होटलबाटै पक्राउ समेत गराएका थिए ।
मन्त्री मगरले एक्सन लिनै पर्नुको कारण खुलाउँदै उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सचिवका यस्तै राष्ट्रघाती कृत्य पाएपछि नेपालमा काम गर्न असुरक्षित रहेको सन्देश समेत विदेशमा पुग्यो ।
सम्भव भएसम्म काम गर्न फर्किन सक्ने अवस्थामा निर्माण कम्पनीले झन्डै दुई हप्ता अघि सिंगापुरमा वार्ता पनि बसाएको थियो ।
उक्त सिंगापुरमा वार्तामा ठेकेदार काममा फर्कन तयार रहेको सन्देश मन्त्रीसम्म आइपुग्यो । तर उसले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
निर्माण कम्पनीको उक्त सर्तमा मन्त्री सकारात्मक बनेकी थिइन् । र, पुरानै निर्माण कम्पनीले कामको निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको अवस्था थियो ।
स्रोत अनुसार आफ्नो कमिसनका लागि सचिव ठाकुरले फेरि पनि मन्त्रीलाई अटेर गर्ने गर्दै आएपछि मन्त्रीले उनीमाथि नै एक्सन गरेकी हुन् ।
बुधबार, ८ फागुन, ०७५